ဘာတွေလည်း အနှိပ်ခန်းဆိုတာ(ဘုရင့်နှောင် ပွဲရုံအတွင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘာတွေလည်း အနှိပ်ခန်းဆိုတာ(ဘုရင့်နှောင် ပွဲရုံအတွင်း)
Posted by talking.boy.25 talking.boy.25 on Feb 11, 2013 in Copy/Paste | 17 comments
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဘုရင်နှောင် ပွဲရုံဝင်းအတွင်းရှိ အနှိပ်ခန်း အမည်ခံ ပြည့်တန်ဆာခန်းများ အား ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရှင်းလင်းပေးပါရန်တိုင်ကြားခြင်း.။ ။ ။
ကျွန်တ်ာများ၏ ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ဘုရင့်နှောင် ပွဲရုံတန်းအတွင်းတွင် အနှိပ်ခန်း အမည်ခံ၍ ပြည်တန်ဆာ အခန်းများအများအပြားဖွင့်လှစ်ထားရှိလျှက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
ထို ပြည့်တန်ဆာခန်းများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိန်မပျိုလေးများ၊တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုံမိန်းမပျိုလေးများအား စည်းရုံးသိမ်းသွင်း၍ ပြည့်တန်ဆာအမူကိစ္စများအားဆောင်ရွက်စေပြီး ငွေရှာ ဂုတ်သွေးစုတ် စေခိုင်းနေသော မာဆက် (spa) အမည်ခံ ပြည့်တန်ဆာခန်းများကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးစေချင်ပါသည်။
ပွဲရုံတန်းအတွင်းနေထိုင်သော တခြားသော ကုန်သည်မိသားစုများ၊ကျနော်များ၏ မိသားစု သားပျို သမီးပျိုများအတွက်ရင်လေးဖွယ်ရာ စိုးရိမ်မိရသည်..။
ယင်းမာလမ်း၊ယုဇနလမ်း ၊စိန်ပန်းလမ်း၊ခရေလမ်းနှင့် ကံကော်လမ်းသွယ်၊လမ်းမကြီးပေါ်တွင်မှာပါမကျန် ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိသော ထိုပြည့်တန်ဆာခန်းများတွင် ထားရှိသော ဧည့်ကြို (waiter )ခေါ် လူငယ်များသည် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ညဉ့်ဦးမှစ ၍ မနက် လင်းကာနီးအချိန်ထိ အခြေအနေ မရှောင် အနေအထားမရှောင်
လမ်းများပေါ်တွင်၊ ညပိုင်းဆိုလူကောင်း ၊သူကောင်း လမ်းထွက်မလျှောက်ရဲ ရအောင်ပင် ဈေးကွက်လိုက်ရှာနေခြင်းများမှာ များစွာ စိတ်ကျဉ်းကျပ်လှသည်။၊တစ်ဆိုင်နှင့်တစ်ဆိုင် အပြိုင်အဆိုင် ဖြင့် နေရာမရှောင်၊လူမရွေး လိုက်လံဆွဲခေါ်ဆောင်နေခြင်းသည် စက်ရွံဖွယ် ရာ အခြေအနေတစ်ရပ်အဖြစ် အော့နှလုံးနာလှသည်..
ထိုကြောင့် စီးပွားရေးနယ်ပယ်နှင့်မိသားစုများနေထိုင်လျှက်ရှိသော ဘုရင့်နှောင်ပွဲရုံအတွင်းတွင်ရှိသော ပြည့်တန်ဆာခန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် ထိရောက်စွာ အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးစေချင်ပါကြောင်း ဓာတ်ပုံနှင့် တကွ ဖော်ထုတ်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
မီးချောင်းအနီရောင်များဖြင့်ညပိုင်းတွင် လူသိထင်ရှားလုပ်နေသာ် ပြည့်တန်ဆာခန်း
About talking.boy.25 talking.boy.25
talking.boy.25 talking.boy.25 has written 1 post in this Website..
View all posts by talking.boy.25 talking.boy.25 →
ကျုပ် ထီးမိုးတော် အဖြစ်နဲ့
လိုက်ပါရစေ …. ဟဲဟဲ …
အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီး ဆိုရင်တော့ဖြင့် …
မကောင်းတာ အမှန်ပဲ …
ဒါ့ထက် … ခညားတို့ ဝန်းထဲမှာ ..
တိုင်တန်းစရာ နေရာ မရှိဘူးလား …
သိသိကြီးနဲ့ လွှတ်ပေးထားတာလား …..
စနစ် ပြောင်းနေပြီနော့ …
တိုင်စရာ ရှိတာ ရဲရဲကြီးတာ တိုင်ပလိုက် …
မရရင် သမ္မတကြီးဆီသာ တက်ပြီး တိုင်ပလိုက် .. အေးချေး .. အေးချေး …
talking.boy.25 talking.boy.25 says:
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဂျီးတော် နွားတော့ဘယ်ကျောင်းပါ့မလည်းဗျာ….တစ်ရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဗျ …
ဘာမုန့်စားမလဲ၊ အာပုံသယ်ကတော့ ကုန်လို့ပြန်သွားပြီ။
ခရေလမ်းဆို အတော် ဆိုးဗျ …စားသောက်ဆိုင်ကအောက် ပြီးရင်အပေါ်တက် ok လျှက်ဘဲလေ …ဒါတွေကို ကျုပ်က ကြည့်နေတာ ကြာပြီ……သိသိကြီး နဲ့ မရှင်းနိုင်သေးတဲ့ အတွင်းပုတ်ဇာတ်တွေဗျ…… အပြင်က ကြည့်လက်ကြိတ်ထိုး အတွင်းက ကြည့် ပေါ်တင်သိ …မယုံရင်သွားတာကြည့် …ဒါကိုမှ ဖုံးဖိထားရင် နီးစပ်ရာမေးကြည့် …မသိမရှိ…
ဟစ်တိုင်ဆိုဒ်မှာ ဟစ်ကြည့် လိုက်ပါလား….
ဂေဇက်သူကြီးက ဟစ်ဟော့ သံတွေကြားရင် သူ့ နှစ်လုံးပြူးကြီး ထထဆွဲကိုင်တတ်လို့ မို့ ….
ဒါမျိုးကိစ္စဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်နား လာဖွင့်မှ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်ကြတာဆိုတော့
ပို့ စ်ပိုင်ရှင် ကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ
အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်
ကိုယ်က ရဲလဲမဟုတ် အမတ်လဲ မဟုတ် တဲ့အခါကြ
ဒီကိစ္စကို မရှင်းနိုင် သ၍ အမျိုးကောင်းသား /အမျိုးကောင်းသမီးတွေ ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးနေဦးမလည်း ။
ဝိုင်းဝန်း ပူပေါင်း ဖြေရှင်း ဖို့ဘဲ မျှော်လင့် ပါတယ်
….ရွာသားမှသဂျီး ….ရွာသားမှသဂျီး …. တိုင်စာရောက်ပြီ
အသံကြားရင်အကြောင်းပြန် ….ဒါဘဲ …
တချို့တိုင်စာတွေ.. သတင်းတွေများ.. တိုင်မှ..တင်မှသိပြီးသွားကုန်ကြတာ…
ကာမရာဂစိတ်ကိုထကြွစေသည့် တရားမ၀င်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
၉-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၉၃၀ အချိန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ထားဝယ်မြို့၊ ပုံကျွန်းရပ်ကွက်၊ ကညုံရပ်ကွက်နေ ဦးအောင်နိုင်(၄၈)နှစ်၏ ““အာရုဏ်ဦး””ဆေးဆိုင်သို့ သတင်းအရ၀င်ရောက်ရှာဖွေရာ အမျိုးသမီးများအားတိုက်ကျွေးပါက ကာမရာဂစိတ်ကိုထကြွစေသည့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Hongzhizhu,Jita Kewang, Taiguofenနှင့် Cangyingfen စာတမ်းများပါ တရားမ၀င်ဆေးမှုန့်အထုပ်(၂၆၈)ထုပ်အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ သဖြင့် ဦးအောင်နိုင်အား ထားဝယ်ရဲစခန်း(ပ)၅၉/၂၀၁၃၊ အမျိုးသားဆေးဝါးများဥပဒေပုဒ်မ ၁၅(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စစ်ဆေးချက်အရ ၁၁၃၀အချိန် အဆိုပါဆိုင်သို့ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဆေးများဖြစ်သည့် ကျားဟိုမုန်းအားတိုးဆေး Play Boy စာတမ်းပါဆေးအမျိုးအစား ၆ မျိုး၊ အချိန် ကြာမြင့်စေသည့်လိမ်းဆေး၊Sholonying စာတမ်းပါလိမ်းဆေး၊Lady A Bergin စာတမ်းပါ လိမ်းဆေး၊ Nivea Beauty Breast စာတမ်းပါလိမ်းဆေး ၂ မျိုး၊ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးငွေကျပ် (၁၉၆၅၀၀ိ/-)ခန့်အား ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ မြိတ်ရဲစခန်းမှ ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ၁၂၃၅အချိန် မြိတ်မြို့၊ ဘုရားကိုင်ရပ်ကွက်နေ အောင်ကျော်မိုး(၄၂)နှစ်၏ကွမ်းယာဆိုင်၊ ၁၂၄၀အချိန် (၁)ရပ်ကွက်ရှိ ဦးကျော်မြင့်(၅၆)နှစ်၏ ကွမ်းယာဆိုင်နှင့် ၁၂၃၀အချိန် ဈေးတန်းရပ်ကွက်ရှိ ဇော်ဇော်ဝင်း(ခ)ဗေဒါ(၂၃)နှစ်၏ ကွမ်းယာ ဆိုင်များသို့ အဖွဲ့များခွဲ၍၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထိုသို့ရှာဖွေခဲ့ရာ ကွမ်းယာဆိုင်အသီးသီးတွင်Red Spider စာတမ်းပါကော်ဖီမစ်ထုပ်၊ American စာတမ်းပါ ကော်ဖီမစ်ထုပ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နိုးကြွစေသည့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆေးဝါးမျိုးစုံ၊ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးငွေကျပ်(၆၇၀၀၀ိ/-)ခန့်အား ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး အောင်ကျော်မိုးအား မြိတ်ရဲစခန်း(ပ)၁၀၀/၂၀၁၃၊ အမျိုးသားဆေးဝါးများဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျော်မြင့်အား (ပ)၁၀၁/၂၀၁၃၊ အဆိုပါဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဇော်ဇော်ဝင်း(ခ)ဗေဒါအား (ပ)၁၀၂/၂၀၁၃၊ အထက်ပါဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီး အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည် (ရဲဇာနည်)
ဆေးနာမည်တွေ ဖျက်ထားမှပေါ့ 
တော်ကြာ လိုက်ရှာဝယ်နေမှဖြင့် 
ကျားဟိုမုန်းအားတိုးဆေး ပလေးဘွိုင်း စာတမ်းပါဆေး ၆မျိုးတဲ့
အချိန်ကြာမြင့်စေသည့် လိမ်းဆေး တဲ့
အဲဒီ သက်သေခံပစ္စည်းလေးတွေ ဘယ်နားမှာ ထားပါလိမ့်နော်
သဂျီးက အရေးထဲ ဆေးကြော်ငြာဝင်သွားသေးတယ်..
ဒို့ရွာသူလေး မပဒုမ္မာဆီက အသံလေးကြားရအုံးတော့မှာပဲ..
အဲဒါကြောင့် ၊ အဘ ခဏ ခဏ ပြောနေရတာပေါ့ ။
ပြည့်တန်ဆာတွေကို တရားဝင် ခွင့်ပြုလိုက်ပါလို့ ။
ပြည့်တန်ဆာတွေကို တရားဝင် ခွင့်ပြုလိုက် ရင် ၊
အခုလို တိုင်စရာ မလိုတော့ဘူး ။
ဘယ်လောက် အလုပ်ရှုပ် သက်သာသွားမလဲ ။